FLM Ivato Famonjena: nanamarika ny 20 taony ny Akon’ny lanitra | NewsMada
Tsy nahasakana ny fiderana an’Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara ny orambe, nitranga omaly tolakandro, teto an- dRenivohitra. Tetsy Antsahamanitra, vory lanona ny maro, niara-nanandra-peo nanome voninahitra ny Tompo noho ny fahasoavana natosany, indrindra tamin’ny Akon’ny lanitra, antoko mpihira ao amin’ny fiangonana loterana malagasy (FLM) Ivato Famonjena.
Nanamarika ny 20 taona nijoroany izy ireo, nandritra ity taona 2018 ity. Marobe ny hetsika efa tontosa, nentina nanasongadinana izany sy ho fiderana an’Andriamanitra. Hetsika famaranana kosa, ny omaly tolakandro, tetsy Antsahamanitra, nanatontosana ity antsan-kira fiderana ity.
Tsy nandeha irery fa notronin’ny antoko mpihira telo ny Akon’ny lanitra tamin’izao fitoriana filazantsara lehibe izao. Samy nitondra ny anjara birikiny sy naneho ny hakanton’ny talenta nomen’Andriamanitra azy amin’ny hira ny KT Ambatovinaky sy ny Kerobima Ankatso ary ny Tanora 67ha.
Tao anatin’izay 20 taona nijoroany izay, efa anjatony ny mpikambana nandalo tao amin’ny antoko mpihira Akon’ny lanitra. Tsy sampana midera an-kira fotsiny izy fa mitaiza ara-panahy ireo mpino mpikambana ihany koa. “… Fa Kristy no zavatra rehetra sady amin’ny rehetra”. Io tenin’Andriamanitra, ao amin’ny Kolosiana 3: 11b, io no nentin’ny Akon’ny lanitra nanamarika izao tsingerin-taona niorenany izao.